Global Voices teny Malagasy » Vesatry Ny Fanaovana Politika, Fanazavana Ny Fifidianana Any Kamerona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Oktobra 2013 23:39 GMT 1	 · Mpanoratra Philippe Menkoue Nandika (en) i Carol Bidwell, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Mainty, Kamerona, Fampandrosoana, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Raha toa ka mihazakazaka mametraka ny taratasy filatsahan-kofidiana ho Solombavam-bahoaka  [fr] Kamerone ireo mpifaninana sasany ary miezaka mandresy lahatra ireo mpifidy amin'ny fampanantenana mahazatra amin'ny fifidianana ny ho mpanolotsaina monisipaly, dia manandrana mividy izany amin'ny vola sy ny fanomezana toy ny labiera sy voanjo ny sasany.
Asehon'i Mathias Mouendé Ngamo, bilaogera, anatin'ny lahatsoratra  [fr] ao amin'ny bilaoginy ny fandaharan'asan'ny Cameroon People's Party (CPP) na Antokon'ny Vahoaka Kamerone an'i Edith Kah Walla, “izay mitady ny seza 132 amin'ireo fifidianana monisipaly ireo ” any amin'ny fari-pitantànana ato amin'ny firenena, ao anatin'izany ny Distrika voalohan'i Douala. Mizara telo miavaka tsara ny fandaharan'asa : ara-politika, ara-toekarena ary ny ara-tsosialy. Ohatra, tian'ny antoko ny :
Miombon-kevitra amin'izany koa ny mpifaninana avy amin'ny Social Democratic Front , izay mampanantena  [fr] :
Tsy hitan'ireo mpifaninana avy ao amin'ny Vondrona Demokratikan'ny Vahoaka Kamerone (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), ilay antoko mpitarika, ny antony hitondràna zava-baovao. Aleony nanaraka ny zavatra efa nisy taloha. Tahaka izany ny nataon'ny mpifaninanan'ny CPDM ho fidiana ho Ben'ny tanànan'ny boriborintany faha-4 ao Yaoundé  [fr], izay te-hanohy ny asa efa natombony nandritra ny fotoam-piasany teo aloha.
Seho tsy takatry ny saina, izay mampiseho tsara ny haratsian'ireo “politicars” (mpanao politika maloto), mpanao politika mpiray tsikombakomba mangetaheta fitondràna, araka ny ilazàn'i Franck William Batchou, mpitoraka bilaogy azy ireo.  Natao hanafenana ny tsy fisian'ny fandaharan'asa politika ny fitondrantenan-dry zareo, ary rehefa hitarina izany dia azo iheverana hoe tsy tsapan'ny Kamerone ny havesa-danjan'ireo fifidianana ireo sy ny dikan'ny vatony. Soa ihany fa tsy adala daholo ny olona.
Nanapa-kevitra ny handray an-tànana ny raharaha ny olona tamin'ny fanontaniana ireo mpifaninana ny momba ny zavatra manavesatra ny fony, manoloana ny fikorontanan'ny fandaharan'asa. Marina ho an'ny vondron'olon-tsotra izany, izay te-hisarika ny sain'ireo mpifaninana hijery ireo olana ara-pahasalamana atrehan'ny Kamerone maro , amin'ny alàlan'ny tetikasa ” fahasalaman'ny vata fandatsaham-bato” (santé aux urnes ). Antso izay antenainay fa tsy ho any an-tsofin'ny marenina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/04/52396/
 lahatsoratra : http://www.echos-grandslacs.info/productions/cameroun-les-eveques-donne-la-cle-du-succes-aux-electeurs
 lahatsoratra : http://mathiasngamo.over-blog.com/article-former-les-conseillers-municipaux-120171374.html
 izay mampanantena : http://www.cameroun-online.com/actualite,actu-23151.html
 Ben'ny tanànan'ny boriborintany faha-4 ao Yaoundé: http://www.yaoundeinfos.com/article-cameroun-election-du-30-septembre-2013-regine-amougou-nnoma-appelle-a-voter-pour-le-rdpc-120159207.html
 lahatsoratra : http://www.cameroun24.net/blog/?pg=actu&ppg=1&pp=1&id=12387
 ilazàn'i : http://www.frankwilliam.com/m/article-120160240.html